Isitezi esiphezulu se-loft e-Dhakhwa House - I-Airbnb
Isitezi esiphezulu se-loft e-Dhakhwa House
Patan, Central Region, i-Nepal
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Sailesh, Sohan, Nigen
U-Sailesh, Sohan, Nigen Ungumbungazi ovelele
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Mey 11.
Isitezi esimise okuka-L esinekhona lombhede, igumbi lokuhlala, ikhishi nendawo yokugezela. Ukufinyelela endaweni evulekile yophahla.
Indawo enhle enhliziyweni ye-Old Patan phakathi kweDurbar Square nePatan Dhoka;
Le loft yesitezi esiphezulu itholakala e-Newari House endala ebuyiselwe enkabeni yomlando yasePatan.
Indlu yakhelwe egcekeni eliseduze kwaseNagbahal, iThempeli Legolide kanye nePatan Durbar Square yemilingo.
Indawo ehlala kuyo iyiqiniso futhi yendabuko.
ubusuku obungu-7 e- Patan
4.85 · 197 okushiwo abanye
I-Old Patan iyindawo enhle ongahlala kuyo! Iyiqiniso kakhulu futhi iyisiko kunezindawo ezonakaliswe izivakashi zase-Kathmandu/Thamel kanye nehlathi lakhona elikhonkolo. Kunamagugu amaningi afihliwe ongawathola: amathempeli amaHindu, ama-stupas amaBuddha, igceke, izindlela eziyimfihlo, izindlu zezindela, izindawo zokudla zendawo ...
Impilo yasendaweni enempilo yabantu baseNewars (iqembu lokuqala lesigodi sase-Kathmandu) ikuqinisekisa ulwazi lwamasiko olucebile kakhulu.
Ibungazwe ngu-Sailesh, Sohan, Nigen
UPrakash noPramila bakwamukela ngenhliziyo yabo yonke, ukuphana kwabo nomuzwa wabo wokungenisa izihambi.
Bangakujabulela ukukusiza ngezeluleko ezinhle futhi babelane nawe Newari Culture yabo.
Ngenhlanhla, uPramila ubuye abe ngumpheki ohamba phambili edolobheni. Ungabhukha i-Nepali Daal Bhat ukuze uthole isidlo sasemini noma isidlo sakusihlwa noma uhlele idili laseNewari phezu kwethala eliphahleni!
Bangakujabulela ukukusiza ngezeluleko ezinhle futhi babelane naw…
USailesh, Sohan, Nigen Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Patan namaphethelo